November 2008 ~ စန္ဒကူး
Sweet December! ဂျင်းသုတ်
မျက်လုံး (သို့) မျက်စိ နာခြင်း
Miss Earth -2008
ရှိသမျှမုန့်ဖိုးလေးတွေစု၊ ကြက်သားဆန်ပြုတ်ကိုအိုးကြီးကြီးနဲ့ပြုပ်၊ ကားပေါ်တင်ပြီး မရှိဆင်း
ရဲသားတွေအိမ်မှာ သီချင်းသွားဆို၊ ပြီးတော့မိသားစုအရေတွက်နဲ့ဆန်ပြုတ်တွေဝေ။ အရမ်း
ပျော်ဖို့ကောင်းတာဘဲ။ အိပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး။ Sweet December လို့ရေးထားပြီးပုံလေး
တယ်။ ခရစ္စမတ်ရောက်ပီဆိုရင်၊ ခရစ်ယာန်တွေရော၊ မဟုတ်တဲ့သူတွေပါသီချင်းလိုက်ဆို
နဲ့ဘာအတွက်၊ ညာအတွက်ဆိုပြီးသီချင်းလိုက်ဆိုပါတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာတော်တောလွဲ
ဘူး။ ကျွန်မသိသလောက်တော့ ရတဲ့အလှူငွေတွေကိုခရစ္စမတ်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာ ဆန်
တယ်။ ပိုက်ဆံပေးရင်လုံးဝမယူပါဘူး။ ၂၅ ရက်နေ့ဘုရားကျောင်းမှာခရစ္စမတ်အစီ
စဉ်လုပ်တဲ့အခါ သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာအလှူငွေဗုံးရှိတယ်၊ အဲဒီမှာလာထည့်ပါလို့ဘဲ
ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီနှစ်ကကျွန်မအတွက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပါဘဲ။ ခရစ္စ
သူတွေသာမက၊ သာကေတ၊ ပုဇွန်တောင်၊ လေးထောင့်ကန်၊ သုံးခွ ကသူတွေပါလာ
တော့မသိဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တစ်ရပေါ့။Sweet Decemberမှာဂျင်းသုတ်လေး
Posted by စန္ဒကူး at 7:40 PM
Labels: စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ကွယ်, သူငယ်ချင်းတို့ရေ
ဒီနေ့တော့အိပ်ရာနိုးတော့ ၉နာရီရှိပီ၊ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိုးအုံ့နေတာနဲ့ဈေးသွား
လိုက်တယ်။ ဈေးရောက်ရင်ဝယ်တာမရပ်နိုင်တာဆိုးတယ်။ နောက်မစားနိုင်ရင်အလကားဖြစ်
ရော။ ဈေးသွားပြီးတိုင်း၊ မစားနိုင်ဘဲလွှင့်ပစ်ရတိုင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးရက်ကြားကတစ်ခါ
တစ်လေ၀ယ်ဝယ်မိတယ်။ ဒီနေ့တော့ မုန်ညှင်းဖူးလေးတွေတွေ့တော့ဝမ်းသာအားရ၀ယ်လာ
သေးတယ်။ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးလေ။ အကြံရှိတယ်။ မုန်ညှင်းဖူးဟင်းထုပ်လုပ်စားမယ်။ လုပ်
မဟုတ်ဘူးလေ။ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းပြန်သတိရလို့။ ပိန္နဲသီးအမှည့်အနံ့လေးကလဲအရမ်း
နောက်တော့ဖရဲသီး (မနေ့ညကကိုးရီးယားကား LastScandal ကြည့်တာဖရဲသီးစားတာတွေ့
ဒူးရင်းသြဇာ (ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဝယ်ဖူးခြင်းပါ၊ ချိုချဉ်လေးစားလို့ကောင်းတယ်)၊ လိမ္မော်သီး
သေးသေးလေး၊ ပိန္နဲသီးအစိမ်းအလုံးလိုက်ကိုအခွံနွှာခိုင်းပြီးယူလာသေးတယ်။ အစီးတွေလက်
မှာကပ်လို့တော်တော်အလုပ်ရှုပ်ပါ့။ စားချင်တာကိုး၊ အဘိုးကိုသတိရလို့၊ ရွာသွားလည်ရင်
မုန့်ဟင်းခါးစားချက်စားချင်တိုင်းမုန့်ဖတ်မရှိလို့လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အကြိမ်ပေါင်းမနဲတော့ဘူး။ ဒါနဲ့မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ပါနှစ်ထုတ်ဝယ်လာတယ်။ ဒါကထိုင်းကလာတဲ့ခေါက်ဆွဲအခြောက်ပါ။မုန့်ဟင်း
အာဂါးကျောက်ကျောမှုန့်တစ်ထုပ်၊ အုန်းနို့၊ ကီဝီနဲ့ ကျောက်ကျောတစ်ဗန်းလုပ်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်မမနက်စာကတော့အုန်းရည်သောက်လိုက်၊ ပိန္နဲသီးစားလိုက်နဲ့ဗိုက်ပြည့်နေပီ။ ထမင်းမစား
ချင်တာအတော်ဘဲ၊ လူကလဲတော်တော်slim လာလို့အသားစားရင်ကောင်းမယ်ဆိုကြိတ်မှိတ်ပီး
ထားရတယ်။ ဈေးမှာငါးတန်းဖြတ်တော့ ငါးခုတ်နေတာသွေးတွေတော့တော့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီး
ဖြစ်ပြီးပြန်လှည့်အထွက်၊ အသားတန်းအရောက်ဝက်ခေါင်းကြီးတွေ့တာနဲ့ လန့်ပြီးပြန်ကွေ့လာ။
သေးလေး။ ၀က်သားကတော့မွေးကတည်းကမစားပါဘူး။ ငါးဆိုလဲအကျည်းခွံမပါရင်မစားတော့
ရှာရခက်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ဘာအသားမှမစားဖြစ်ဘူး။ အသားစားချင်စိတ်ကုန်ခမ်း
နေပီ။ ငါးခြောက်နဲ့ငါးပိတော့ရှောင်လို့မရသေးဘူး။ အသားလဲဘယ်တော့ပြန်စားချင်စိတ်ပေါ်
လာမလဲမသိသေးဘူး။ မောတယ်။ ဖြစ်သလိုဆံထိုးတစ်ချောင်းနဲ့လိမ်ပြီးထုံးထားတဲ့ကျွန်မဆံပင်
ကိုကဗျာဆန်လို့ဆိုပြီးသူငယ်ချင်းကဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ၊ ဒီမနက်တွေ့မှသတိရတယ်။ အဲဆံပင်
ကိုတစ်ခုခုလုပ်အုံးမှ အိမ်မပြန်ခင်။ တော်ကြာပါးပါးက ပဲပြုပ်သည်မဆံပင်အရောင်ဆိုပီးပြော
ဆာနေတယ်။ အိုးလေးထဲမှာဘဲထည့်စိုက်ထားတာ။ မြေပေါ်ချလိုက်ရင်မြက်ရိတ်စက်စာမိမှာ
Posted by စန္ဒကူး at 10:15 PM
ပေမယ့်စိတ်ကူးထဲမှာစားဖို့စီစဉ်နေတာ ငါးပိကောင်ချက်နဲ့ အချဉ်ဟင်း၊ မှိုကြော်၊ ငါးသ
Posted by စန္ဒကူး at 9:13 AM
ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့မျက်စိနာနေတာနဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုမရှိပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့
သီးဘဲ။ ဗူးနဲ့ ၆မွှာလောက်ရှိမယ်ထည့်ပေးလိုက်တာနေ့လည်ပိုင်းစားရုံးပြန်သွားရင်ကိုယ်မှာ
နိုးတော့မျက်လုံးတွေနီရဲနေတာ၊ သေချာပီပေါ့။ရုံးသွားသေးတယ်၊ ငြိမ်ငြိမ်မနေလူတစ်ကာ
ကိုယ် ဟေ့ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့ကူးမယ် ဆိုပီးလိုက်ခြောက်နေသေးတယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်း
နဲ့တဲ့။ နေလို့ရမလားလေ။ အလုပ်တွေအပီးသတ်ရတော့မယ်၊ နောက်အပတ်ဆိုကျွန်မသွား
တော့မှာ၊ ဒီကြားထဲမှာလူမှုရေးအလုပ်တွေကလဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာရူးခါနီးဘဲ။ အရေးထဲ
မှာ President's secretary က မွေ့နေ့ရှင်တွေအတွက် banner လုပ်ရင်ဘာ programသုံး
လဲလာမေးတာ၊ စိတ်ကများလွန်းတော့ skype လို့ဖြေလိုက်သေးတယ်။ နောက်မှအဲငါဘာ
ထည့်ထားပြီးတစ်ကယ်မျက်စိမနာတာလား၊ အပူကန်တာလားတော့မသိဘူး (မျက်စိနာ
ရင်တစ်ပတ်ကြာတယ်ပြောတာကိုး) ဒီနေ့တော့မနီတော့ဘူး။ englandကကျွန်မရဲ့ Prof
လဲဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ်တဲ့သူကတော်တောစိတ်ပူရှာတယ်၊ နေ့တိုင်းလာလာမေးနေတာ၊ ဒီနေ့လဲလာမေးတော့ကျွန်မစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ still attractive လို့ဖြေလိုက်တော့အရူးတဲ့။
attractive လား/မလားဆိုတာကတော့ကိုယ်သာအသိဆုံး။ ငယ်ငယ်တုန်းကနို့ဗူးဘဲစို့ရတယ်။
အခုထိပြောစမှတ်ဖြစ်တုန်း၊ ကျွန်မသောက်ခဲ့တဲ့နို့မှုန့်ဗူးတွေအများကြီး၊ အခုထိသိမ်းထားတုန်း၊
လူတစ်ကိုယ်လုံးမှာအစိတ်ပိုင်းတိုင်းအားလုံးကသူ့တာဝန်နဲ့သအရေးကြီးတာပါ။ အထူးသဖြင့် မျက်လုံးကအရေးကြီးဆုံးထင်တာဘဲ။ ကျန်တာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်မျက်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ကြည့်နေ
ဒီတစ်ခါတော့နာလဲနာတယ်၊ အောင့်လဲအောင့်တယ်။အခုတော့သက်သာသွားပါပြီ၊ ဘုရား
ကျေးဇူးဘဲ။ စကားမစပ် မျက်လုံးနဲ့မျက်စိကိုခုထိမခွဲတတ်သေးဘူး..း(
Posted by စန္ဒကူး at 8:27 AM
သြစတေးလျားမှာနေခဲတော့ သူများမေးတိုင်းသမီးလို့ပြန်ပြန်ဖြေလေ့ရှိတဲ့သူတွေပေါ့)သမီးရင်း ပြန်လာလည်တော့လျှောက်လည်ကြမယ်ဆိုပြီးအတင်းခေါ်တာနဲ့ပါသွားပြန်ပါတယ်။ မောလ်
တွေလျှောက်လည်ရတာဝါသနာမပါတာတော့အမှန်ဘဲ။ ၀ယ်စရာရှိရင်တစ်မျိုးပေါ့။ ဒါပေ
ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ကားပေါ်ရောက်ရင်ခွေနေတာ၊ အေးတာလဲပါတယ်။ကားတွေကလဲ
ဖို့ကိုတော့ကျွန်မအိမ်ကရော၊ ချစ်သူကပါသဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ အသွားလမ်းကိုအပြန်လမ်းက
ကားကကျော်မောင်းတယ်။ ကားမှတ်တိုင်မရှိစိတ်တိုင်းကျရပ်ချင်တဲ့နေရာရပ်တယ်။ မိုးရွာ
ရင်ပိုဆိုးတယ်။ ရေကြီးပြီးအဲဒါထိုင်ပေတော့တစ်နေကုန်နီးပါးကားပေါ်မှာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယ
ပေါ်မှာနေလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မရုံးကသူတွေစိတ်ပူလို့အရေးထဲဖုန်းကဘက်ထရီကုန်၊ ဆိုးဝါး
ကောင်းဖြစ်ရင်ရုံးမှာဘဲလာထိုင်ချင်တာ။ ရုံးမှာကပျော်တယ်လေ။ လူတွေအများကြီးနဲ့၊ အိမ်မှာ
ဆိုတစ်ယောက်တည်းအိပ်ချင်အိပ်၊ မအိပ်ရင်ဘလော့တစ်ကာလိုက်ဖတ်၊ အွန်လိုင်းကသူငယ်
ချင်းတွေနဲ့ရန်ဖြစ်၊ ပျင်းတာတော့အရမ်းဘဲ။ ကျွန်မချစ်သူကပြောတယ်။ အင်တာနက်ရှိနေတာ
ဗဟုသုတရမယ့်စာတွေဖတ်၊ အကျိုးရှိမယ့်အကြောင်းရာတွေလေ့လာ။ ကျွန်မကတော့အင်တာ
နက်ကိုအကျိုးရှိရှိမရှိရှိမသိဘူး။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘလော့တွေ့ရင်ဖတ်လိုက်၊ ဖိုရမ်ထဲဝင်ဖတ်လိုက်။
ဘူး။ ကိုယ်ပျော်သလိုနေနေတာ၊ အဲဒီအတွက်လဲဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူး။ မဟုတ်တာလုပ်
တာမှမဟုတ်တာ။ မနေ့ကအဝေးမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။ နင်
ကလဲပျင်းရင်သူများဆီသွားလည်ပေါ့တဲ့။ သူပြောတာတော့ဟုတ်နေတာဘဲ။ ကျွန်မကအိမ်လည်
ကတစ်ခြား၊ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ကုန်ပီ) ဒါလဲကျွန်မအကျင့်တစ်ခါတစ်လေတစ်ခုခုပြောဖို့စဉ်း
ရိုက်ခဲ့တယ်။ ရေခဲပြင်စကိတ်စီးနေကြတဲ့သူတွေရော (အဲဒါအရမ်းစီးဖူးချင်တာ၊လဲကျမှာသေချာ
တာသိနေတော့ခုထိမစမ်းရသေးဘူး။ ကလေးတွေဝိုင်းရီမှာစိုးလို့ ဟဟ)။ အတက်ဆင်းလက်
မဲဖောက်ပေးတာတွေရော။ Home decor ခရစ္စမတ်ပင်အကြီးကြီး၊ ဂိန်းစော့တဲ့နေရာမှာကောင်
လှည်းလေး အစုံဘဲ..အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိုးချုပ်ပီ။ ဒီမှာညနေ ၅း၀၀နာရီဆိုမှောင်နေပီလေ....
Posted by စန္ဒကူး at 3:35 AM
လဲချက်ထားသေးတယ်။ ငါးခြောက်လေးတွေဝယ်ထားတာအသင့်ရှိနေတာနဲ့ ရေဆေးပြီး
ကြော်ပီးဖယ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးမှကြက်သွန်ဖြူနီဆီသတ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းထားတာ
Posted by စန္ဒကူး at 11:26 PM
အိမ်နောက်ဖေးမှာအပင်တစ်ပင်တွေ့တယ်၊ အဲဒီအပင်လေးက ရွှေပန်းငွေပန်းလိုအပင်လေးပါ။
ပြန်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ကလိကလိဖြစ်နေတာ။ ဒီညနေပိုင်းတော့အပင်ကိုအင်တာနက်မှာလှန်
လှောရှာကြည့်တော့တာဘဲ။ ရုံးပတ်ပတ်လည်မှာပွင့်နေတဲ့ပန်းကြီးတွေကအရမ်းခန့်တာဘဲ။ အဲ
ဒီပန်းတွေကတော်တော်ကြံ့ခိုင်တယ်။ ပလတ်စတစ်လိုဘဲ။ ကျွန်မအရမ်းသဘောကျတာ။ အဲဒီ
အပင်အရွက်ကအိမ်နောက်ကအပင်နဲ့အနံ့တူတူဘဲ။ အပင်မျိုးစားတူလို့နေမယ်။ ဒါနဲ့ Galanga
ဆိုပြီးလိုက်ရှာတာ Ginger မျိုးနွယ်စုထဲကအပင်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီပန်းက မြန်မာလိုတော့ဘယ်
လိုခေါ်မလဲမသိဘူး။ ရှာတွေ့သလောက်တော့ Torch Ginger Flower (Zingibier Etlinger
Elatior) မလေးလိုတော့ Bunga Kantanလို့ခေါ်တယ်။ထိုင်းတွေကတော့Kaalaaလို့ခေါ်တာ
အင်ဒိုတွေက Bongkot လို့ခေါ်တယ်။တော်တော်တုန်းပါလားကျွန်မမြန်မာလိုမသိဘူး။မလေး
အစားတွေထဲမှာတော့ Laksa ကအရမ်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်မဆီကိုတောင် Laksa Paste
တစ်ဗူးရောက်လာသေးတယ်။ ဘယ်လိုစားရမှန်းမသိပါဘူး. သူတို့အလွယ်ခေါ်ရင်တော့ Laksa
ပန်းပေါ့။ ဖိလိပိုင်မှာတော့ ဖယောင်းပန်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ အရောင်က ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊
အဖြူရောင် စုံနေတာဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရုံးဘေးမှာပွင့်နေတာတွေကတော့ ပန်းသွေးရောင်
ခေါ်မလား၊ ပန်းရောင်လို့ခေါ်မလား။ (ပုံတွင်ရှု) အရသာကတော့တစ်ကယ်ထူးခြားပါတယ်။
စားရမှန်းမသိခဲ့လို့သာနော်။ သိများသိရင်ကုန်တာကြာပေါ့။ ရှိန်းတိန်းတိန်း၊ နဲနဲအချဉ်ဓာတ်
လို့သတဲ့။ သေချာတော့တစ်ရက်ချက်ကြည့်အုံးမယ်။ ဒီနေ့ကတော့စူးစမ်းတဲ့အဆင့်ဘဲရှိသေး
တယ်။ ပန်းဖူးကဌက်ပျောဖူးအသေးစားလေးလိုဘဲ။ ဖြတ်လိုက်ရင်လဲဌက်ပျောဖူးလိုဘဲ။ ဆေး
အဖြစ်နဲ့တစ်မျိုး၊ တို့စရာအဖြစ်နဲ့တစ်ဖုံစားလို့ရတဲ့ဒီအပင်ရော၊ ပန်းပါ အရွယ်တင်နုပျိုစေပါ
ဆောင်နေကြတယ်။ ဟိဟိ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အပင်ကိုသေချာလေ့လာထားပြီးတော့ ပန်းပွင့်ကို
ချိုးလာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ပန်းအိုးထိုးထားလိုက်တယ်။ လောလောဆယ်တော့မိန်းမ
ရှင်းနေမှ ကိုယ်ကသာမလုပ်တတ်တာ။ အိမ်အလှဆင်ဖို့ဝါသနာမပါတာလား၊ ideaမရှိတာလားတော့
မသိဘူး။ ကျွန်မဧည့်ခန်းကအရုပ်တွေနဲ့ဘဲပြည့်နေတာ။ခုတော့နဲနဲကျက်သရေရှိလာသလိုဘဲ။း)
Posted by စန္ဒကူး at 6:52 AM
တာကိုတော့ ကျွန်မတော်တော်သဘောကျတယ်။ supermarketတွေမှာအခွံနွှာထားပြီးအတုံးလေး
တွေတုံးပီး သားရောင်းတာကိုတွေ့တယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်မသိသလောက်တော့သူတို့ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ထားတဲ့အရန်သင့်ဟင်းချက်သီးနှံတွေဟာတစ်ပိုင်းပုပ်သွားတာတို့အမြင်မလှတာတို့၊အဲဒီထဲက
မှာဈေးထဲသွားရင်ရွှေဖရုံသီးစီးစီးလေးတွေရမယ်လို့အော်တဲ့အသံကြား ယောင်တုန်းဘဲ။ရွှေဖရုံသီးက စီးမှစားကောင်းတာလေ။ဒီမှာတော့ရင့်မယ်ထင်တာဝယ်လာလိုက်တာဘဲ။စီးတာတော့သိပ်မစီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်စားလို့တော့ကောင်းပါတယ်။အခွံနွှာရတာတော့တော်တော်လက်ဝင်တယ်။အခွံနွှာတဲ့ အခြစ်
လေး နဲ့ခြစ်တာတောင်လက်ရှသေးတယ်။အတုံးလေးတွေတုန်းပြီး ချက်ဖို့အသင့်ပြင်လိုက်တော့ တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းအနီတောင့်တွေကိုဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ပြီးဗူးလေးတစ်ဗူးထဲထည့်
်မှုန့် လေးတွေ ပါထည့်ဆီသတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါးငံပြာရည်လေးနဲနဲထည့်ပြီးထပ်ဆီသတ်၊ပြီးတာနဲ့ ရွှေဖရုံသီးလေးတွေကိုထည့် အရင်လုံးပြီးမွှေထား၊ ရေနဲနဲထည့်၊ ဆားနဲနဲထည့်ပြီးနွမ်းသွားမှရေထည့်ပြီး နူးအောင်တည်ပေတော့ဘဲ။
ပါးပါးကိုသတိရတယ်။ သူကဟင်းချက်တာအရမ်းတော်တာ။ ရွှေဖရုံသီးကိုဘယ်လိုချက်လဲတော့မသိ
ဘူးအိုးကပ် ခြောက်ခြောက်လေးချက်တာ။ စားလို့အရမ်းကောင်းတယ်။ ကျွန်မကတော့အဆင်ပြေသလို့ချက်လိုက်တာပါဘဲ။ စားလို့တော့အရမ်းကောင်းတယ်။ကြိုက်တာကိုး။။
Posted by စန္ဒကူး at 8:28 PM
ကုလားစာချက်ရမလား၊ ယူရို တွေစားလို့ရအောင်ချက်ရမလားခေါင်းရှုတ်တာနဲ့အာလူး
ဂျုံမှုန့်ကိုအရေဖျော်၊ ကြက်သွန်နီကိုခပ်ထူထူလှီးပြီး ပြင်ဦးလွင်က ထောပတ်ဆီနဲ့ဆီသတ်၊
ဂျုံမှုန့်အရည်ကိုထည့်၊ ပွက်တာနဲ့ဆက်မွှေပြီး၊ နို့စိမ်းဗူးကိုဖောက်ထည့်ဆူအောင်တည်။
အဲဒီအချိန်ဖုတ်မယ့်ဗန်းထဲမှာ အာလူးအလုံးလေးတွေကို ကြွေစက္ကူခံပြီးစီထည့်၊
နဲ့နို့စိမ်းရည့်ကိုအပေါ်ကလောင်းချ၊ ဆားနဲနဲထည့်ပြီး အပေါ်က ကြွေစက္ကူအုပ်ပြီးပြန်ဖုံး
ပြီး မီး ၁၆၀လောက်နဲ့ နာရီဝက်လောက် oven ထဲထည့်လိုက်တာ၊ ကျက်သွားပါရော။
ပြီးမှအပေါ်က နှမ်းဖြူလေးတွေဖြူး၊ ငရုတ်ကောင်းဖြူးလိုက်တယ်။ စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရသာ
လေးကတစ်မျိုးလေး... ချဉ်ငံစပ်သာကြိုက်တဲ့ကျွန်မကတော့မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်
ဘယ်က recipe ရလဲတော့မမေးနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထွင်ထားတာ.. ဟဟ
Posted by စန္ဒကူး at 6:07 AM
တိုးတိုး ရစ် တဲ့
ပန်းတွေ နဲ့ နှိုင်းယင်
Posted by စန္ဒကူး at 6:39 AM
သိပ်စိတ်ကုန်တယ်။ ဒါကြောင့်ခရီးမထွက်ချင်တာလဲပါတယ်။ တောင်းလိုက်တဲ့ဗီဇာကြေး
တွေကနင့်နေတာ၊ ကိုယ်ပေးရတာမဟုတ်လဲ မကျေနပ်ဘူး။ အခုလျှောက်အခုမရတဲ့အ
ပြင်တောင်းလိုက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေက Thesis လုပ်ရင် A+ရနေပီ။ စင်ကာပူလိုနိုင်
ငံတောင်မှ တောင်းနေကျသာမန်စာရွက်တွေပြလိုက်ရင်ကိစ္စပီးနေပီ။ ဘန်ကောက်နဲ့
မလေးကတော့အဆိုးဆုံးဘဲ။ တစ်ခြားနိုင်ငံတော့မသိဘူး။ ကျွန်မနေတဲ့နေရာမှာတော့
တော်တော့်ကိုရစ်နိုင်တယ်။ ရုံးကခေါ်စာ၊ ထောက်ခံစာအကုန်ပြတာတောင်မြန်မာမို့
bank statement ပြခိုင်းပြန်ရော။ အဲဒါလဲလက်ခံလောက်ပါတယ်။ ဆိုးတာသူတို့တောင်း
ဆိုတဲ့ minimum balance က ဒီကပိုက်ဆံ ၂၀၀၀၀၀၊ တော်တော့်ကိုအမြင်ကတ်သွား
တယ်။ သူတို့သံရုံးက counselor တွေတောင် ၁၀ လလောက်အလုပ်လုပ်တာတောင် အဲလောက်ပိုက်ဆံသူတို့အကောင့်ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့နိုင်ငံမှာဘာများသွားလုပ်
တွေတစ်သီကြီးထုထားတာ တွေ့ရက်နဲ့ရစ်တာလောက်မုန်းတာမရှိဘူး။ ရုံးချိန်ဖျက်ပြီး သံရုံးထိသွားအချိန်ကုန်မခံနိုင်လို့ driver ကိုသွားပေးခိုင်းတော့စာရွက်တွေပြန်ပေး
လိုက်တယ်။ ဒေါသထွက်သည်မှာပြောဖွယ်မရှိတော့။ ကိုယ့်အာရှနိုင်ငံခြင်းခြင်းကိုရစ်
နေတာ။ ဖုန်းခေါ်ပြီးတရပ်စပ်ပြောလိုက်မှ၊ အဆင်ပြေတော့တယ်။ အသဲယားတယ်။စိတ်လဲတိုတယ်။အမြင်လဲကပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာ၊မြန်မာပြည်
ပြန်တာဘဲအေးတယ်။ ဗီဇာမလိုဘူး။ စိတ်ရှုတ်စရာမလိုဘူး၊ စိတ်လဲချမ်းသာတယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 6:19 AM
ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲလုပ်တုန်းကပိုနေတာမို့၊ ခပ်မာမာပြုပ်ထားပြီး မုန်ညှင်း၊
ကြက်ဥ၊ ဂေါ်ဖီ၊ ငရုတ်ပွအနီတွေရောပြီးကြော်စားဖြစ်တယ်။ အရမ်းတော့မကောင်းလှဘူး။ ရန်ကုန်မှာရောင်းတဲအဆီရွှဲ့ရွှဲ ကြက်သားတုံးလေးတွေနဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ကိုတော့မမှီဘူးပေါ့
လေ။ အနံ့လေးကအစကွာတာ။သုံးတဲ့ဆီ၊ ခေါက်ဆွဲအမျိုးစား၊ အဲဒါတွေကြောင့်ထင်ပါရဲ့။
Posted by စန္ဒကူး at 5:55 AM
ပြောင်းဖူးသေးသေးလေး (baby corn)
ကော်မှုန့််ဖျော် corn starch
Posted by စန္ဒကူး at 11:52 PM
ဒီနေ့ဆိုရင်ဈေးနေ့ပေါ့။ ဈေးသွားမယ်စိတ်ကူးထားပေမယ့်အိပ်ရာနိုးတော့ မနက် ၁၀ နာရီ
ရှိနေပီ။ ဒါနဲ့ဈေးကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသွေးအရမ်းတက်ထားတော့ ကြက်
တွေ့တာနဲ့ဝယ်လာခဲ့တယ်။ အရေးထဲမှာ ဆားမပါငါးခြောက်တွေရောင်းတာတွေ့လို့ဝယ်လာ
ဂျုံမှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း (၂)ဇွန်း
ဂျုံမှုန့်ကိုအရေဖျော်ပြီးအိုးထဲမှာတင်လိုက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးပွက်ပွက်ဆူနေမှ ကြက်သွန်
ဖြူနီထောင်းထားတာထည့်၊ ဆားနဲနဲထည့် ငါးပြုတ်ထားတာကိုချေပြီးထည့်၊ ကြက်သားခဲတစ်
၀က်ကိုထည့် ပြီးမှ ကြက်ဟင်းခါးအရွက်တွေကိုထည့် အကြာကြီးထပ်တည်စရာမလိုတော့ဘူး။
သောက်လို့ရပီ။ ကောင်းမှကောင်း၊ ခါးခါးလေး... ခါးသက်သက်လေး...း)
ကရွှေ၊ ဒီမှာ ကုလားဆိုင်ကိုတစ်ကူးတစ်ကသွားဝယ်ရတယ်။ ရှားမှရှား.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်
ကျွန်းဆိုတော့အုန်းသီးကပေါမှပေါ။ ပေါတယ်ဆိုတာအုန်းသီး၊ ဈေးကတော့ပေါပါဘူး။ ရွှေဝါ
တင်းပီ။ အွန်လိုင်းမှာလဲရန်လိုက်ဖြစ်လို့ဝပီ။ ပြန်အိပ်တော့မယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 11:35 PM
ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာ။ တစ်ခါတစ်လေထောင်းစားရမရတော့မသိဘူး။ စားတာဘဲ
ပြီ။ ပင်စိမ်းကကျွန်မစိုက်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အိမ်နီးချင်း အင်ဒိုတွေစိုက်ထားတာ
စပါးလင်တောင်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့တော့ပင်စိမ်းထောင်းစားမှ။ ထောင်းရမှာပျင်းလို့
ပင်စိမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်းချည်သီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း
ပြီးရင်အားလုံးထည့် ဘလန်ဒါမှာမွှေ၊ ဆားနဲနဲ ချိုမှုန့်စားရင်နဲနဲထည့် ရင်အထောင်းတစ်
ခုရပါပြီ။ ဒီတိုင်းစားတာတောင်ချဉ်စပ်မွှေးမွှေးလေး.. ထမင်းပူပူလေးနဲ့ဆို..ကောင်းမှကောင်း
Posted by စန္ဒကူး at 11:24 PM
ဤရာသီဖွားများသည် အလွန်ချစ်တတ်သော၊ အလွန်မုန်းတတ်သော အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တစ်ပါးသူမဆိုထားနှင့်မိမိကိုယ်မိမိ ပင်နားမလည်​နိုင်သော ထူးခြားသည့် နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာ့​နက္ခတ်ပညာရှင်ကြီးများက တညီတညွတ်တည်း အဆိုပြုသည်။ ကန္တာရအလယ် ပတ်ကြားအက်နေသည့် ကျောက်မြေကြားရှိ အလွန်အဆိပ်ပြင်းသော ကင်းမြီးကောက်တစ်ကောင်၏ ရင်ထဲမှ မွတ်သိပ်နေသော၊ နူးညံ့လွန်းသော၊ အချစ်ကြီးသော ၊အမျက်ကြီးသော နှလုံးသားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သူဟု ဖော်ကျူးပြန်သည်။ အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးကိုသာ လုပ်လိုသော သဘာဝရှိသည်။ကောင်း၊ဆိုး၊မှန်၊မှား လုပ်သင့် မလုပ်သင့်စသည့် အစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်ထားချက်များကို လုံးဝလက်မခံခြင်းမရှိ။ မိမိရင်ထဲမှ ကောင်းသည်၊ မှန်သည်ဟုထင်လျှင် ခေါင်းအေးအေးနှင့် တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်သည်။ မိမိခံစားချက် ခံယူချက်ကို ဦးစားပေးမည်။ ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာနှင့် မဖြစ်မနေ လုပ်တတ်သည်။ မိမိစိတ်ထဲ၌ရှိသော အရာများကို တစ်ပါးသူအား ဖွင့်ပြောတိုင်ပင်ခြင်းမရှိ လျှို့ဝှက်စွာ သိုသိပ်၍ မဖြစ်မနေ လုပ်တတ်သော သဘောရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကို ချစ်မိပြီဟု ဆုံဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် အလွန်အချိန်ယူတတ်သောလည်း ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက လုံးဝ ပြန်မပြင်တတ်ပေ။ဝေဖန်မှုကို လုံးဝဂရုမစိုက် ဥပေက္ခာပြုတတ်သည်။ဥပေက္ခာနှလုံးသား ပိုင်ရှင်ဟုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မိမိချစ်သူက အမှာအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ပါကလည်း ဒေါသအမျက်ပြင်းစွာဖြင့် လုံးဝခွင့်မလွှတ်။နှလုံးသားထဲမှ အပြီးအပိုင် ထုတ်ပစ်ပြီးဥပေက္ခာပြုလိုက်မည်။ ပင်ကိုသဘာဝတွင် အလွန်ထူးခြားသည်။ ပြန်မပြော၊ နားမထောင်၊ တစ်ပါးသူတားဆီးသည့် ကိစ္စကိုမှ လုပ်လိုသည်။ အားနည်းသောသူဘက်မှ ရပ်တည်မည်။ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ မေတ္တာစိတ်ပြောင်းလဲလွယ်သည်။ ခံစားချက်ကို မျိုသိပ်တတ်သည်။ မိမိ ဘက်မှ တတ်အားသရွေ့ပေးဆပ်သည်။ သည်းခံသည်။ ခံနိုင်စွမ်းကုန်သောအခါ အရွဲ့တိုက်မည်။ အလွန်ချစ်ခဲ့သူကိုပင် စွန့်ပစ်မည်။ ခွဲခွါသောအခါတွင်လည်း သံယောဇဉ် လုံးဝမရှိသလောက်အောင်ပင် ဖြစ်မည်။ နောက်တစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုကလည်း အလွန်လေးနက်သော မေတ္တာနှင့်ချစ်မည်။
အချစ်ဦးနှင့် ဆုံစည်းကိန်းမရှိ ။ သို့သော် အချစ်ဆုံးသူနှင့် ပေါင်းရမည်။ ချစ်သူခင်သူပေါများမည်။ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား မေတ္တာရှိ ချစ်မိပြီဆိုကလည်း အခြားသော သူများကဲ့သို့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်များကို ဖွင့်ပြောလေ့မရှိ။ တစ်ဦးတည်း လျှို့ဝှက်စွာ ကြိတ်ကြံတတ်သည်။ မိမိ အချစ်ကို နှုတ်မှ မပြောခင် ချစ်သူရှိရာသို့ အချိန်ရှိသရွေ့တရစ်ဝဲဝဲလုပ်နေတတ်သည်။ ချစ်သူဘဝရောက်ပြန်လျှင်လည်း နှစ်ဦးတွေ့ကြသောအခါ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ၊ကြင်ကြင်နာနာပြောဆိုခြင်းမရှိ။ ခေါင်းကြီးငုံ့ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ကာ စကားမပြောဘဲ ဂွတိဂွကျ မပွင့်မလင်းနေတတ်သော သဘာဝအားပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိကို တကယ်ချစ်ရဲ့လားဟုပင် ချစ်သူက ထင်လောက်သည်။ စကားပြောပြီဆိုပါကလည်း ချစ်သူက စိတ်ဝင်စားသည် မဝင်စားသည်ကို ဂရုမစိုက်၊။အခ်ျစနှင့် မပတ်သက်သည့် အရာများကို ကရားရေလွှတ်ပြောတတ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမြင်တွင် မတူသော ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ဦးကို ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးနိုင်သော တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သောအရာသည် အချစ်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
Posted by စန္ဒကူး at 11:06 PM
အရွက်လေးနဲ့မွှေးနေတာ၊ ငါးခြောက်ကြော်လေးနဲ့၊ ဒန့်သလွန်ရွက်ကိုငါးခေါင်းနဲ့ဟင်းချို
ချက်တာတာ၊ စားလိုက်တာနှစ်ပန်းကန်ကုန်သွားတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားတစ်ယောက်
က၊ ကူးကူးဘာလို့ဒီလောက်တောင်စားရတာလဲလို့ပြောသေးတယ်။ စားသလောက်လဲ
မ၀ပါလားတဲ့။ ကျွန်မကငါကတစ်ခါတစ်လေမှစားတာ၊ အမြဲအဲလိုကြီးစားနေတာဟုတ်ဝူး
လို့တေးထားတာ၊ ဒီညနေတော့ငါးနှစ်ကောင်သွားဝယ်လာပြီး ဆားနဲ့ပွတ်ရေသေချာ
ဆေးထားပြီး ငံပြာရည်လေးနဲနဲထည့်ပြုပ်ထားလိုက်တယ်။ နဲနဲကျက်တာနဲ့ဆယ်ထား
ထားတာကိုထည့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ စိမ်းစားငါးပိနဲနဲ၊ဆားနဲ့ မန်းကျည်းမှုန့်
(Knorr tarmarine powder) နဲ့ဆီနဲနဲကိုထည့်ပြီးသမအောင်နယ်လိုက်တယ်။
လေ။ တော်တော်လေးအိုးကပ်ဆူနေပီဆိုမှာတစ်ချက်လောက်မွှေပြီး ငါးပြုတ်ထားတဲ့
ပြုံး အနံ့မွှေးကြိုင်နေတဲ့ငါးခေါင်းချဉ်ရေတစ်ခွက်ရပါပြီး၊ မုန်ညှင်းစိမ်းကိုကျွန်မသဘော
Posted by စန္ဒကူး at 6:28 AM
တော့ကောက်ညှင်းထုပ်ထားစားနေတယ်တဲ့။ သူပြောမှဟုတ်သားဘဲ ငါလဲအဲဒါစားချင်
တော့အရမ်းကြိုက်၊ အသေကြိုက်။ အိမ်ကလှမ်းမှာလို့မရတဲ့အရာဆိုတော့ကိုယ့်ဘာ
ဆန်စစ်စစ်မရှိဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်တူတာလေးစားရလဲမဆိုးဘူးလေ..အဲဒါနဲ့ glutinous
rice တစ်ထုပ်ဝယ်၊ ဌက်ပျောသီးကလဲဖီးကြမ်းဘဲရှိတာမို့အဲဒါလေးတွေနဲ့ဘဲ။ ဌက်ပျော
ရွက်ကိုတစ်ခြံလုံးပတ်ရှာရသေးတယ်။ တွေ့တော့လဲအပင်ကသေးသေးတွေ၊ အရွက်
တွေအကုန်ခုတ်လာခဲ့တယ်။ ခြံပြင်မှာတော့ဌက်ပျောပင်တွေအများကြီးပါ၊ သွားခုတ်
ရမှာရှက်လို့။ ရှိတာမှဒီခြံနေထဲမှာနေတာ မြန်မာဆိုလို့တစ်ယောက်တည်း၊ ဒီမြန်မာမ
ကောက်ညှင်းကိုရေစိမ်၊ ဆားနဲနဲသကြားနဲနဲထည့်နယ်ထားပြီး ဌက်ပျောရွကိုရေဆေး
ထုပ်တော့မယ်ပေါ့၊ အဲဒီအထိကဟုတ်နေတာဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝါရင့်စားဖိုမှူးလို့ထင်
လာမိသေးတယ်။ တစ်ကယ်စထုပ်တော့ဌက်ပျောရွက်ကကျိုး၊ ပေါက်ပြီးဆန်တွေက
ထွက်ချည်လို့လဲမရ၊ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားလဲမအောင်မြင်တဲ့အဆုံး၊ မထူးတော့ပါဘူး
ဆိုပြီး ဖုတ်တဲ့ခွက်အပြားထဲမှာအောက်ခြေတစ်ထပ် ကြွေစက္ကူ foil ခံပြီးတော့ ဌက်
ပျောရွက်တွေကိုခင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကောက်ညှင်းဆန်၊ ဌက်ပျောသီး၊ သကြား
ဆားနဲနဲ နဲ့ သီဟိုစေ့ကိုပါအကုန်ရောသမမွှေပြီးခင်းထည့်လိုက်တယ်။ ဌက်ပျောရွက်
အပေါ်ကထပ်အုပ်ပြီး ကြွေစက္ကူ foil ကိုအပေါ်ကအပီးသတ်လုံအောင်ပိတ်လိုက်
တယ်။ ဆန်နယ်တုန်းကထွက်လာတဲ့ရေနဲနဲကိုပါရောထည့်ထားတယ်။ ပြီးတာနဲ့
ovan ထဲထည့်ပြီး 180 လောက်နဲ့ တစ်နာရီလောက်ဖုတ်ထားလိုက်တာ၊ ပြီးတာနဲ့
ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့... တွေလား... အရမ်းတော့မစီးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဌက်ပျော
ရွက်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ဌက်ပျောသီးကောက်ညှင်းဖုတ် (ပေါင်းအိုးမှမရှိတား(
ရပါပီ။ မနက်ဖြန်တော့ရုံးကအမကြီးတွေကိုအတင်းသွားကြွေးအုံးမှ၊ တစ်ယောက်
Posted by စန္ဒကူး at 8:34 AM
စထွက်လာတာတွေ့တာနဲ့မစောင့်နိုင်ဘဲ လေးငါးခက်ဆိတ်လာခဲ့တယ်။ ငရုတ်သီးပင်မှာ
လဲအသီးတွေဝေလာပြီမို့ ပူတီနံထောင်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပီ။ ၀ယ်ထားတဲ့ကြက်သွန်က
ချင်နေတာ။ ကျွန်မဦးလေးလူပြိုကြီးဆိုပူတီနံထောင်းကိုအသေကြိုက်၊ အိမ်လာ
လည်တိုင်းမာမီကအမြဲထောင်းပေးရတယ်။ ထောင်းသမျှအကုန်သူဘဲစားတာ။ ကျွန်မ
ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အချဉ် ပန်းသံပုရာတစ်လုံး ဆိုအလုပ်ဖြစ်ပီလေ..
ငရုတ်သီးကိုအရင်ညက်အောင်ဆားနဲနဲထည့်ထောင်းပြီး ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီကိုပါ
မညက်တစ်ညက်ထောင်း နောက်ဆုံးမှ ပူတီနံရွက်လေးနဲ့ကြက်သွန်မိန်လေးနဲနဲကိုပါထည့်
ထောင်း.. မညက်အောင်ထောင်းတာပေါ့.. အချိုမှုန့်စားတတ်ရင်နဲနဲလေးထည့်ပြီးတာနဲ့
Posted by စန္ဒကူး at 10:33 AM
ဒီမှာ Potluck ရှိတိုင်းခေါင်းစားတာအရမ်းဘဲ။ သတ်သတ်လွတ်ကလဲကိုယ်စားချင်သလို
သာချက်တတ်တာမှ စကားအရပြောရရင်ရောင်းတန်းဝင်တော့မဟုတ်ဘူးလေ။ လူအများ
နဲ့ဝိုင်းစားကြမယ့်အခါတော့ ကြည့်ကောင်းလောက်အောင်ချက်တတ်အုံးမှ။ ဒီတစ်ခါတော့
ဘာအကြံမှမထွက်လာတဲ့အဆုံးအသီးတွေဘဲသုပ်ဖို့အတွက် supermarket ကိုသွားပြီး
ပန်းသီး - ၂ လုံး
Pear - ၂ လုံး (မြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူး၊ အရသာကသစ်တော်သီးလို)
Lettuce - အလုံးသေးတစ်ထုပ် (ဂေါ်ဖီထုပ်လိုပါဘဲ၊ ဒါပေမယ့်ပွပွရွရွလေးပါ)
စိမ်းစားဥ - ၁ လုံး (ဒီကစိမ်းစားဥတွေကဖရဲသီးအသေးစားနီးပါးရှိတယ်)
မုန်လာဥနီ ခါကြက်ဥ - ၃ တောင့် (ခြစ်တဲ့ဟာလေးနဲ့သေးသေးရအောင်ခြစ်ထား)
ဆလတ်ပင် - ၂ ထုပ်
ငရုတ်ပွအနီကြီး - ၃ လုံး (အစေ့ထုတ်ပြီးအမြောင်းလိုက်လှီးထားပါ)
စပျစ်သီး seedless - ကီလိုဝက်
လိမ္မော်သီး - ၅ လုံး
Salad Dressing with Olive oil'
နေရာမှာသုံးတဲ့အဆီ ကိုရောမွှေလိုက်တာနဲ့ western အကြိုက်အသုပ်ရပါပြီ။
ညနေပိုင်းဆို whole wheat bread တစ်ချပ်နဲ့ အသီးရွက်သုပ်နဲ့ပေါ့။ မြန်မာသုပ်
Pear, Lettuce, Salad dressing
Posted by စန္ဒကူး at 2:09 AM